Xulka Kubadda cagta ee Gobolka Benaadir oo markale guul gaaray “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Xulka Kubadda cagta ee Gobolka Benaadir oo markale guul gaaray “SAWIRRO”
Xulka Kubadda cagta ee Gobolka Banaadir ayaa markale guul ka gaaray tartanka cayaaraha ee Maamul Goboleedyada ee ka soconaya Muqdisho, waxaana Xulka Gobolka Benaadir uu noqday Xulkii ugu horeysay ee u soo baxda wareega afar dhamaadka, kaddib markii ciyaartii galabta ay 3-0 uga badiyeen xulka kubadda cagta ee Galmudug.
Ciyaartoyda Gobolka Banaadir ayaa soo bandhigay ciyaar ay xirfadeeda sareysay oo ay jecleysteen dhamaan intii ka soo qeyb gashay, waxaana ay afka ciidda u dareen Xulka Galmudug.
Intii cayaartay socotay ayaa Ciyaartoyda Xulka Galmudug waxaa kaarka cas laga siiyay ciyaaryahan u sitay Nambarka 6aad, kaddib markii kubad ku sii socotay goosha, oo soo dhaaftay goolhayaha uu gacan ku soo bixiyay, taasoo garsooraha uu kaarka cas ku siiyay, isla markaana rigoore ama gool ku laad laga dhigay ay Xulka kubadda Cagta Gobolka Benaadir u badaleen gool.
Xulka kubadda cagta ee Banaadir ayaa 6 dhibcood ugu soo gudbay wareega afar dhamaadka ee tartanka, waxaana labo ka mid ah u dhaliyay Xulka Gobolka Benaadir cayaaryahan lagu magacaabo Cabdimajiid Cismaan, halka goolka saddexaad uu dhaliyay Maxamed Cismaan.
Maalinta berri ah waxaa wada ciyaari doona ciyaartoyda matala Maamul goboleedka Puntland iyo Hirshabeelle, inkastoo Hirshabeelle ciyaartii hore laga soo badiyay, halka Puntland ay ciyaarteeda u horeysay ee tartanka berri ciyaari doonto.
Guddiga doorashooyinka Qaranka oo daahfuray qaamuuska eray bixinta doorashooyinka “SAWIRRO”
Wafdi uu hogaaminayo Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo lagu soo dhaweeyay Garoowe “SAWIRRO”
Wafdi uu hogaaminayo Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo lagu soo dhaweeyay Garoowe "SAWIRRO"